Kenya oo sheegtey in ay soo diri doonto diyaaradaha hawada Somalia mareya ee… – SBC
Kenya oo sheegtey in ay soo diri doonto diyaaradaha hawada Somalia mareya ee…
Posted by editor on Noofember 3, 2011 Comments
Kenya oo guluf dagaal oo aanu cadeyn salka uu ku dambeyn doono ka wada gayiga Soomaaliya, isla markaana ku doodaysa inay la dagaalamayso Al-Shabaab ayaa sheegtey in ay soo ridi doonto oo qarxin doonto diyaaradaha hawada Soomaaliya ee ay uga shakiso inay hub wadaan xoogaga Shabaabka.
Afhayeenka ciidamada Kenya Maj. Emmanuel Chirchir ayaa sheegay in ay ciidamadoodu burburin doonaan oo ay dhulka soo dhigi doonaan diyaarad kasta oo ay arkaan iyadoo ku degaysa deegaanada ay maamulaan Shabaabku, isla markaana sharaxaad ka bixin wayda su’aalo la xiriira inay ay sido rakaab ama xamuul.
Emmanuel wuxuu sheegay in hadii aanay ku qancin jawaabta ka timaada diyaarada ayna ku degto deegaanada Shabaabka in ay burburin doonaan.
Afhayeenka ciidamada Kenya wuxuu sheegay in sadex diyaaradood oo hub u wada Al-Shabaab sida uu sheegay ay ku degeen magaalada Baydhabo todobaadkii la soo dhaafay.
Afhayeenku waxaa kale oo uu sheegtey in ciidamada badda Kenya ay quusiyeen ayna dajiyeen dooni ay saarnaayeen sida uu sheegay 18 ka mid ah dagaalyahanka Shabaab, dhacdadan oo uu sheegay in ay ka dhacdey agagaaraha dekada magaalada Kismaayo galinkii dambe ee maalinimadii Arbacada.